Amapayipi nokufakwa kwe-PP-R kususelwa kokungahleliwe okune-polypropylene okhiqizwe njengezinto ezingavuthiwe ezinkulu futhi kukhiqizwa ngokuya nge-GB / T18742. I-Polypropylene ingahlukaniswa ibe yi-PP-H (i-homopolymer polypropylene), i-PP-B (i-block copolymer polypropylene), ne-PP-R (i-copolymer polypropylene engahleliwe). Ingabe ...
Amapayipi e-PVC athatha amapayipi e-PVC-U ukuhambisa amanzi, enziwe nge-polyvinyl chloride resin njengempahla eyinhloko eluhlaza. Ziyangezwa ngezithasiselo ezidingekayo futhi zakhiwa ngokucubungula i-extrusion. Ipayipi lamanzi lokwakha elinamandla aphezulu, ukuzinza okuhle, impilo ende yesevisi nezindleko eziphakeme ...
1. Ipayipi lezimayini le-PE Phakathi kwawo wonke amaplastiki ezobunjiniyela, i-HDPE inokumelana nokugqokwa okuphezulu kakhulu futhi ibonakala kakhulu. Lapho isisindo samangqamuzana siphakama, kulapho impahla imelana nokugqokwa, idlula ngisho nezinto eziningi zensimbi (njenge-carbon steel, insimbi engagqwali, ithusi, njll.). Ngaphansi komhlangano ...